Qiimaha hubka lagu kala iibsado ee dalka Itoobiya oo cirka isku shareeray - Muqdisho Online. Caasimada Muqdisho
Home Wararka Qiimaha hubka lagu kala iibsado ee dalka Itoobiya oo cirka isku shareeray
Qiimaha hubka lagu kala iibsado ee dalka Itoobiya ayaa waxaa la soo sheegayaa in uu cirka isku shareeray ka dib markii xaalada siyaasadda eea dalka Itoobiya ay ka soo darayso maalinba maalinta ka danabeeysa. Wararka ka imaanaya guud ahaan degaanada ay degan-yihiin qowmiyadaha Tigreeyga, Oromada ayaa la soo sheegaya in iibka hubku uu marayo meeshii ugu saraysay ee abid uu gaadho hubka noocyadiisa kala duwan ee dadwaynuhu ay qaataan.
Wararka ayaa intaas ku daraya in qoriga loogu iibsiga badan uu yahay nooca loo yaqaano AK47 kaas oo qiimahiisu gaadhay meel uusan waligii gaarin waxaana la sheegayaa in gudaha wadanka lagu kala iibsanayo in kabadan 60 kun oo bir taas oo noqonaysa meeshii ugu badnayd oo waligeed lagu kala iibsado.
Qoryaha kale oo qiimahooda kacay waxaa ka mida qoriga loo yaqaano PKM, Soomaliyana looga yaqaano dabajeexa isagu noqday midka ugu qaalisan iyo waliba noocyada kale ee qoryaha iyo bastooladaha oo dhamaan noqday kuwo qaali ah. Qiimaha hubka ee cirka isku shareeray ayaa lagu micneeyay gadashada hubka oo noqotay mid aad u heer saraysa taas oo lagu sababeeyay dadwaynaha oo isu diyaarinaya colaada kabilaabatay guud ahaan wadanka Itoobiya.
Dhinaca kale hubka faraha badan ee gacanta shacabka galaya ayaa lagu macneeyay ciidamada oo si xowli ah hubkooda u iibsanaya waxayna shacabka gacantooda galay hub aad ubadan oo midkii dowlada ah kaas oo khatar galin kara jiritaanka xukunka wayaanaha. Diyaar garowga colaada Itoobiya ayaa gaadhay meeshii ugu saraysay kadib markuu qofkasta oo Itoobiya kunool iibsaday qori uu kidifaaco naftiisa iyo maalkiisaba wuxuuna wadanku umuuqdaa mid isu badali doona wadan uu qorigu kataliyo.
Previous articleMareykanka oo ka hadlay duqeyn ka dhacday shabeelada Hoose.
Next articleMadaxweynayaasha DG oo maanta kulan ku yeeshay Magaalada Dhuusamareeb
Maxaa isku soo beegay “Hadalkii Omar Filish ee Doorasho 1Q1C” & Hadal jeedinta MW Farmaajo?